Kuonekwa uye Makomborero kuburikidza neKukurudzira | Martech Zone
Makorokoto kushamwari yedu, Maka Schaefer, uyo akabvunzurudzwa nguva pfupi yadarika paCBS nezvebhuku rake idzva, Dzokera Pane Simba: Iyo Rimutsiriro Simba reKlout, Social Scoring, uye Influence Kushambadzira. Takaita hurukuro inoshamisa naMark Schaefer mavhiki mashoma apfuura pane yedu redhiyo show.
Imwe yekiyi mubvunzurudzo yandinonyatsokoshesa kurudziro yaMark iyo evanhu vezvenhau inopa chero munhu mukana wekuwana kuoneka uye kuwana mibairo zvichibva pesimba ravo. Ndo zvatiri kudzidzisa vanhu mazuva ese. Kana iwe uri nyanzvi yezvinhu kana nyanzvi mune imwe ndima, kana iwe uine chakasarudzika chigadzirwa, iyo webhu inopa chikuva chine mikana isingaperi yekukubatsira iwe kuwedzera icho chigadzirwa kana hunyanzvi uye kukupa mubairo nekuda kwako.
Tags: HarareindavhiyuMaka SchaeferDzokera paKukurudzira